Momba anay - Jiangyin Iverson Decoration Material Co., Ltd.
ARAHABAINA NY IVERSON
Jiangi Iverson Decoration Material Co., Ltd. dia niorina tamin'ny taona 2005. Orinasa midadasika mampiditra fampandrosoana, famokarana ary varotra izy io.
Kitapo plastika vita amin'ny hazo (WPC), vato vita amin'ny plastika vato (SPC), gorodona vita amin'ny homogenous PVC ary ireo kojakoja mifandraika sns.
Ny tombotsoan'ny gorodona
Friendl tontolo iainanay, matanjaka non-slip, antibacterial sy agé-proof, tsy tantera-drano sy tsy misy hamandoana, manify sy maivana, mahazaka havaozina, mahazaka feo ary mampihena ny tabataba, mahazaka afo ary mahatohitra afo, ary tsara tarehy sy lamaody.
Ny vokatray dia be mpampiasa ao trano, hotely，hopitaly, sekoly, fivarotana lehibe, magazay, seranam-piaramanidina, kianja filalaovana ary toerana hafa.
Ny orinasanay dia mandrakotra faritra iray an'ny 16, Metatra toradroa 000 miaraka amin'ny atrikasa maoderina sy trano fanatobiana madio. Manana tsipika famokarana 4 izahay, miaraka amin'ireo injeniera manam-pahaizana, mpiasa mahay ary ekipa mpivarotra mihoatra ny 10 traikefa an-taonany amin'ny gorodona laminate. Ny fahaizan'ny famokarana isan-taona dia5, 000 000 metatra toradroa mifototra amin'ny masinina sy teknolojia mandroso.
"Miezaha ho matotra, manaova ny marina, tontolo iainanal Fiarovana, fanavaozana mitohy "hatrany no foto-kevitry ny orinasanay.
Haavo avo lenta
Izahay dia manizingizina ekipa mpamorona matihanina, fitaovana mandroso, akora tsara kalitao, fizotran'ny siansa, fanaraha-maso kalitao henjana ary drafitra varotra tonga lafatra.
Nandritra ny taona maro, ny mpanjifa dia nanana fahatokisana lehibe tamin'ny orinasanay noho ny kalitao tena mendrika, ny serivisy tsara ary ny fikirizanay amin'ny asa aman-draharaha mifanaraka amin'ny fifanarahana sy ny lalàna mifandraika amin'izany.
Ireo mpiasan'ny orinasantsika dia manana toe-tsaina tsara, ekipa fifandraisana ary fandrindrana, miasa mafy ary mahazaka tsindry asa. Tanora isika, be zotom-po, mahafinaritra, za-draharaha ary manampy. Rehefa manao raharaha miaraka aminay dia tsy misy azonao antoka.
Izahay dia mikendry ny hanome kalitao sy serivisy mahafa-po ho an'ny mpanjifantsika eto amin'izao tontolo izao. Manantena izahay fa hametraka fifandraisana ara-barotra tsara amin'ireo mpanjifa rehetra ao an-trano na any ivelany mba hampivelatra ny tsena ary hanao ho avy mampanantena. Iverson dia mametraka ny mpanjifa ho lohalaharana foana ary azo antoka fa mpiara-miasa azo antoka sy azo itokisana ianao.